Apple bụ akara nke na-ere ọtụtụ ngwaahịa n'oge 4Q15 | Esi m mac
Ọzọkwa Apple na-emeziwanye ahịa ya n'oge ikpeazụ nke afọ nke afọ
Ọ bụ ezie na ọ bụghịzi ụlọ ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa, Apple bụ naanị onye na-azụ ahịa ụwa ahụla ka ahịa ya na-eto n'oge nkeji iri na ise nke afọ 2015 dịka akụkọ nke Gartner consultancy. Na mkpokọta, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ndị na-eweta ngwaahịa na ndị nrụpụta, a na-eme atụmatụ na mbupu maka ọrịre nke akụrụngwa na-agbadata site na 8,3% na nkeji iri na ise a, na-anọ na 288,7 nde nkeji.
Dị ka Mikako Kitagawa, Onye isi nyocha na Gartner si kwuo, nkeji nke ikpeazụ a nke 2015 adịlarị nke ise so na-ada na ntinye nke akụrụngwa gburugburu ụwa gbasara usoro ndị na-azụ ahịa, ebe ọ bụ na ire ere ekeresimesi enwebeghị ike ịbawanye mbupu ụwa, na-ezo aka na mgbanwe nzụta ịzụ ahịa nke ngwa a. N'aka nke ọzọ n'ahịa azụmaahịa, Windows 10 n'ozuzu anatala nyocha dị mma, mana dịka atụ anya ya, Mbugharị na Windows 10 adịkarịrị ala na nkeji nke anọ, ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ ka nwere ya na oge ikpe.
Mpaghara niile ahụgoro mbupu na mbupu. A na-eche na ọ nwere ike ịbụ, na mgbakwunye na mgbanwe na mmasị ịzụ ndị ahịa, na mbelata ego nke na-aga n'ihu na-emetụta ahịa na EMEA, Latin America na Japan. N’akụkọ ahịa ndị a agbakọtara ebubatala Pasent 10 na 2015 ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na mpaghara ndị gara aga.
Gartner si ele ihe anya ire ere na 2016 bu mbelata nke 1 pasent tụnyere 2015, na-ekwe omume nke mgbake na larịị nke software ere na njedebe nke 2016. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị na-ele Apple si Mbupu maka a ikpeazụ nkeji iri na ise, anyị na-ahụ otú ha toro site 2,8% afọ mgbe afọ ruru 5.675.000 nkeji, nke sụgharịrị n'ime pasent 7,5 nke ahịa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ọzọkwa Apple na-emeziwanye ahịa ya n'oge ikpeazụ nke afọ nke afọ
N'ikpeazụ 1Password 6 maka Mac rutere na ọtụtụ ndozi
Nke a bụ otú iCloud Photo Library si arụ ọrụ